126. नेपाली पत्रकारहरुका लागि डिजिटल सुरक्षा अत्यावश्यक
You are at Home Podcast 126. नेपाली पत्रकारहरुका लागि डिजिटल सुरक्षा अत्यावश्यक
नेपालका १० मध्ये ७ जना पत्रकारले आफूले डिजिटल असुरक्षाबाट पिडित भएको बताएका छन् । यो तथ्यांक फ्रिडम फोरमले नेपालभरीबाट एक सय पत्रकारका बीचमा गरेको एक अध्ययनबाट प्राप्त भएको हो । यस तथ्यांकलाइृ केलाउँदा नेपाली पत्रकारीतामा डिजिटल असुरक्षा एउटा गम्भिर समस्या भैसकेको तथ्यहरु पाइएको छ ।
पत्रकारले कस्ता किसिमका डिजिटल थ्रेटको सामाना गरेका छन् ? ती थ्रेटहरुमा उनीहरुले कस्तो प्रतिक्रिया जनाए ? थ्रेट दिने व्यक्ति वा निकाय को थिए ? र, भविष्यमा पत्रकारहरुका लागि डिजिटल थ्रेट कम गर्न के गर्नुपर्दछ ?
यस्तै प्रश्नहरुमा अध्ययनमा सहभागी पत्रकारहरुले के कस्तो प्रतिक्रिया दिए ? यसै अध्ययनको प्रतिबेदनमाथि आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, नानुमैँँया खडका र सुरज राय ।
सुनौँ फ्रिडम चौतारी पडकाष्टको १२६ औँ अंक :